Sidee loo hagaajiyaa khaladaadka soo kabashada markaad biligleyneyso Rom Android 4.4 Kit Kat | Androidsis
Francisco Ruiz | | Soo kabashada Android, ROM, Tababarada, Noocyada Android
Hadaad mid heshay Rom Android 4.4 KitKat la jaan qaada qalabkaaga iyo ka soo kabashada, markaad isku dayeyso inaad iftiimiso, waxaad helaysaa qalad la mid ah tan: "Deji_metadata. Nasiib darro », ha moogaanin waxa aan hoosta kuugu sharixi doono maxaa yeelay hubaal waa ku xiiseyn doontaa.
Xalka dhibaatada ayaa la helay mahadsanid isticmaale Horumarinta XDA waxayna noo ogolaanaysaa inaan ku shidanno kuwan Rooms Android 4.4 Kit Kat iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo Dib-u-habeyn cusub oo la cusbooneysiiyay.
1 Maxay soo kabashadeenu noo tusaysaa qaladkan?
2 Sidee loo hagaajiyaa qaladka?
Maxay soo kabashadeenu noo tusaysaa qaladkan?
Sababta Dib u soo kabashadeenii hore ay noo tusayso qaladkan, waa sababta Google wuxuu ku sameeyay xoogaa isbedel ah feylka Updater-qoraalka noocyada ah Android 4.4 Kit KatHalkii aad isticmaali lahayd set_perms, waxaa hadda lagu sameeyaa feyl la yiraahdo metadata.
Iyadoo xalka lagu soo bandhigay Horumarinta XDA Uma baahnid inaan cusboonaysiinno soo-kabashadeenna, in kasta oo ay suurtagal tahay, waxaan shaqsiyan kugula talinayaa inaad ka fogaato dhibaatooyinka oo aad cusbooneysiiso nooca cusub.
Waxa aan halkaan ku qeexayaa waxay u janjeedhayaan in ka badan wax kasta oo loogu talagalay boosteejooyinkaas aan lahayn cusbooneysiin la yaqaan ee Soo-kabashada oo la jaan qaadi karta Roms-kan cusub Android 4.4 Kit Kat.
Sidee loo hagaajiyaa qaladka?
Si aad u xalliso qaladkan ku jira boosteejooyinka processor-ka cudud-7, waa mid fudud sida soo dejiso faylkaan y ku nuqul santuuqa romanka taasi ayaa noo horseedaysa dhibaatada noocan ah.
Waa inaan nuqul ka sameysannaa adigoon furin falka feylka oo midka cusub soo jiidaneynin cusboonaysiin-binary taasoo ka dhalatay kala-daadinta feylkii horay loo soo dejiyey ee loo maro waddada META-INF / com / google / android.
Habkani waa u ansax dhammaan Rooms Android 4.4 Kit Kat iyo xirmooyinka Gapps de Android 4.4 Kit Kat.
Sideen kuugu sheegaa inaad iska ilaaliso dhibaatooyinka xaqiijinta ZIP, feylka waa in la guuriyo si toos ah ugu dheji zipka romka laakiin adigoon hoos u dhigin, tan awgeed waxaan uga heli karnaa dariiqa aan soo sheegnay marinka faylka baaraha Windows ama barnaamijyo dibadeed sida 7zip.
Macluumaad dheeraad ah - LG Optimus G, Rom CM11 oo aan rasmi ahayn Android 4.4 Kit Kat
Xigasho - Horumarinta XDA
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » Xalka khaladka ka soo kabashada markaad isku dayeyso inaad iftiimiso Android 4.4 Kit Kat Rom
21 faallooyin, ka tag taada
Waan diidanahay dijo
Waad salaaman tihiin, layguma soo koobi karin eraybixinta ku saabsan mobilada. Waan ka xumahay Waxaan hayaa Nexus4 oo markaan rakibayo Android 4.4 way ku dhagtay. Ilaa shalay ma dhaafto shaashadda ay 4 goobood ka muuqanayaan, sidii inay wax rarayaan. Halkaasna kama gudbi karo ama ma qaban karo. Faylka aad sheegaysid, halkee baan dhigaa? Maxaa yeelay ma aanan helin ...
Ku jawaab yodiscrepo
Ma haysto Nexus 4, halkii aan lahayn Nexus laakiin waan arki doonaa haddii aan ku caawin karo.
Wixii aan ka akhriyey, waa inaad kala soo baxdaa asalka Nexus ROM (halkan, https://developers.google.com/android/nexus/images ) iyo adigoon ka sii deynin (waxay ku jirtaa .tgz), ku fur 7zip, raadi galka kuu tilmaamaya kuna jiido (ama nuqul ka samee oo dhaji) feylka cusboonaysiinta-binary (tan hadaan la furin) galkaas, hubaal halkaas wuxuu noqon doonaa mid kale oo adiga ay kuu sheegi doonto inaad bedesho. Xir faylka romka iyo voila, waa inaad sameysid nuqul keyd ah oo aad taleefanka ku xirtaa sawirkan cusub.
In kasta oo aan u maleynayo inaysan waxba iga baxsan, waxaan kugula talinayaa inaad si uun ula xiriirto Francisco si uu kuu amaahiyo cashar ama kugu caawiyo hawsha. Aan cadeeyo, waligay maan sameyn howlahan ama rakibin ROM-yada, waxaan ula jeedaa, waxaan kaga hadlayaa faallooyin
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabta. Waan isku dayay laakin xalka ima siinin, ama ma aanan ogeyn sida runta loo helo ... Sikastaba waxaan isku dayay tan iyo wax la mid ah oo aan ka helay goob fagaare ah, laakiin ima aysan caawin. Shalay waxaan dib u cusbooneysiin ku sameeyay taleefanka oo aan dib u soo ceshaday xogtii warshadda, waxaanan ogaaday in aan waayey wax kasta oo aan haystay (oo aan hore kombuyuutarka ugu keydiyey) laakiin ay ku bilaabantay Android 4.4 si kastaba ha noqotee. Thanks to Google play Waxaan dib u soo celiyey codsiyada aan haystay iyo sidoo kale, si xun uma xuma haba yaraatee ... waxaan idhi, waad ku mahadsantahay jawaabtaada maadaama laga yaabo inay caawin karto cid kale. By the way, waxaan arkay inay tahay dhibaato marba marka ka dambaysa ka muuqata Pepephones, laakiin waan waydiiyey iyagoon waxba ogayn.
Dhib malahan, marwalba waxaan iskudayaa inaan keeno xal hadaan ogahay.
Benjamin Cepeda dijo
Faylkani miyuu ku habboon yahay s3 gt i9300?
Ku jawaab benjamin cepeda
Tani waxay ku taal terminaal kasta iyo Rom Kit Kat kasta.
Markay ahayd 28/11/2013 22:40 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Waayahay Thanks kapo
Rubén Martínez Seixido dijo
Salaan! Waxaan hayaa Galaxy S (i9000). Waxaan isku dayay inaan rakibo MacKay Kit Kat rom. Anigana way i fashilaysaa. Waxaan isku dayay inaan sameeyo waxaad dhahdo si aan ugu rakibo feylkaan romka, laakiin iima oggolaaneyso inaan sameeyo. Xal kasta? Sideen u cusbooneysiiyaa soo kabashada haddii ikhtiyaarkan uusan shaqeyn?
Jawaab Rubén Martínez Seixido
Waan rusheeyey rakibaadda !!! Waxaan ka fiicnaan lahaa inaan uga tago sidii ay ahayd ...
Ku jawaab Lys
Ernesto Nebrijo dijo
Wanaagsan, aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada waxaan ku guuleystey inaan ku dhejiyo ROM-kayga ATRIX HD mahadsanid ...
Jawaab Ernesto Nebrijo
Waxay ii sheegaysaa qalad IME mana jiro wax calaamad ah…. iyadoo aan waxba jirin
grasiiiiiiiaasss ,,,,,,, Horeba waan rajo beelay laakiin markaan aqriyay tan iyo fulinta tilmaamaha waxaan awooday inaan xaliyo dhibaatada ...... mahad badan.
Ku jawaab melvin
Waad salaaman tihiin, ha u isticmaalin soo kabashada ama sidee tahay su'aashu, kaliya waxaan raacayaa talaabooyinka uu dhaho boostada waana intaas?
Nelson Cordoba dijo
Waxaan ku isticmaalay c-romka 4.4.4 on a Huawei y300-0151 oo dhibaato ayaa i soo martay, waxay iila muuqatay sidii mar hore oo kale la rakibay laakiin markii ay dib u bilaabatay shaashad cagaaran ayaa ka muuqatay laba sanduuq, mid buluug ah iyo mid casaan iyo dhaqaaq ma leh Sidaa awgeed, iima oggola in aan galo soo-kabashada iyo in ka yar xaaladda go'an ee soo-kabashada lagu rakibay, qof ma i caawin karaa?
Ku jawaab Nelson Cordoba
Fernando Adrian Campazzo dijo
Hello Francisco, waxaan hayaa qalad markii aan isku dayayay inaan rakibo cm2 romka lg g806 12-kayga, kahor intaanan rakibin dhib la'aan, kadib markaan rakibo (qalad aad u daran waan gartay) romantiga Vietnamese lollipop ee lg g2 dhibaatadan ayaa ii muuqatay , nasiib wanaag waxaan ku rakibi karaa roms-ka sida daruurta ama keydka ah, laakiin ma ahan cm12, waxay igu tuuraysaa farriinta soo socota: e: qalad lagu fulinayo cusboonaysiinta binary ee zip ´ / sdca rd / cm-12…., haddii aad hayso wax fikrad ah fadlan faallo, mahad aad u badan.
Jawaab Fernando Adrian Campazzo
Ka waran walaal ... Waxaan haystaa samsung gt i9000 ... Waxaan isku dayay inaan rakibo romkat-kan laakiin hadda waxaan isku dayaa inaan shido oo ma bilowdo ... sidoo kalena ma galayo habka soo-kabashada. waxba ma ... caawiyo maxaan samayn karaa ??? Mahadsanid
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga oo leh m4 ss1050 caawimaad
Ku jawaab luia
ka tagid dijo
Waad salaaman tihiin galab wanagsan waxaan haystaa samsung s3 mini gt-i8200n oo aan kucusubyahay tan os runtiina, soosaariddeeda aad baan u bixinayaa waan xididaystay qolkaygii iyo nidaamka opevo waa la tirtiray waxaan ku guulaystay inaan rakibo soo celin laakiin waan waxay dhahdaa ma lahan nidaam qalliin waxaan isku dayay inaan dhowr rakibo laakiin qalad ayaan ku dhacaa markaan bilaabayo orodka, ii sheeg inaad khabiiro ku tahay arintan, waxa aan sameynayo, horeyba 3 maalmood ayaan u haystaa waana bidaar.
Ku jawaab omitoke
Dhibaato isku mid ah ayaan ku qabaa s3 mini gt.i8200n, mar dambe maheysto waxa romka ah ee aan isku dayo inaan ku soo nooleeyo
dioooooosssssss fadlan iga caawi waxaan horeyba u haystay 3 maalmood tan iyada oo aan wax natiijo ahi ka soo bixin durba waanan quustay
Saa'uul farqiga dijo
Adeer fuck adiga ayaa hostiaaaaaaaaa !! Ku jeclahay! Way ii shaqeysay aniguna waxaan horeyba u haystaa moobilkeyga oo shaqeynaya!
Jawaab Saa'uul Gap
Caddaalad darrada: ilaahyada naga mid ah waxay u yimaadaan Android
Sida loo rakibo Soo-kabashada wax laga badalay LG G2